Gareewwan uggurraa beekkamoo });
Addunyaan teenya uggurtoota/ haakaroota marsariitii hedduu guyyaatti keessummeessiti.
Addunyaa ‘cyber’ keessatti haakaroonni gara garaa qofaadhan hojjatu. Gariin isaanii immoo gareen qindaa'anii sochii isaanii geeggeessu. Haakaroota qofaa socha'an caalaa kanneen gareen socho'an baay'ee hamoodha.Dandeettii nama hedduun qindoominaan waan hojjetaniif.
Biyyoonni addunyaa hedduun isaanii gareewwan haakaroota kanneen dhoksaan yoo deeggaranillee; afaan isaaniin akka isaan garee shororkeessitoota ta’an dubbatu.
Uggurraa isaanitirraa kan ka'e fedhan vaayrasii namatti gadhiisu. Isin jalaa cufu. Fedhan odeeffannoo nama jalaa guurratu. Icciitii nama jalaa baasanii fuula addunyaaf afu.Yoo hammaatanis fuula haak godhan sanarratti waan garaa isaanii namatti gadhiisu. Yakka isin hin beekne fi keessatti hin hirmaanne keessa isin galchanii yakkiamtoota isin godhu.
Gareewwan haakaroota gurguddoo hanga har'aatti addunyaa tanarratti beekkaman keessaa;
Isaan kunneen addunyaa ‘Cyber’ keessatti beekamtii olaanaa qabu.